Dhismaha mesh Panel - Shiinaha Hebei Samsung Birta Wire mesh
Dhismaha mesh Panel waxaa ka mid silig welded xayndaabka guddi bowd mesh / guddi mesh welded / welded dayrka mesh / bowd mesh welded / guddi welded 1. welded guddi bowd mesh waxaa la aasaasay by alxanka silig steel carbon yar ama silig ahama. Waxaa ka mid ah galvanization kulul-rusheeyey, galvanization electro, PVC-dahaarka leh, mesh silig welded gaar ah. Welded awood guddi mesh waa antisepsis sare iyo oxidation- u adkaysta. Waxaa laga yaabaa in si weyn loo isticmaalaa sida dhismaha, dayrka, decoration iyo mashiinada ilaalinta ee ku sugan ...
Dhismaha mesh Panel waxaa ka mid silig welded xayndaabka guddi bowd mesh / guddi mesh welded / welded dayrka mesh / bowd mesh welded / guddi welded
1. welded guddi bowd mesh waxaa la aasaasay by alxanka silig steel carbon yar ama silig ahama. Waxaa ka mid ah galvanization kulul-rusheeyey, galvanization electro, PVC-dahaarka leh, mesh silig welded gaar ah. Welded awood guddi mesh waa antisepsis sare iyo oxidation- u adkaysta. Waxaa laga yaabaa in si weyn loo isticmaalaa sida dhismaha, dayrka, decoration iyo mashiinada ilaalinta in industry, beeraha, gaadiidka iyo gaadiidka, macdanta, maxkamadda, cawska iyo beerista, iwm.
Welded Panel bowd mesh laga sameeyey oo mesh tayada welded ka xoogbadan, iyadoo guri xitaa dusha, qaab-dhismeedka adag, waxaa loo isticmaali ballaadhan ee dhismaha, cuntada, beeraha iyo wixii la mid ah.
2. mesh welded faahfaahinta guddi xayndaabka
Wire dhexroor: 0.15mm-12mm
size mesh: 1/2 "-6" (1/2 "x1 / 2" "x1", 1, 2 "x2", 3 "x3", 4 "x4", 5 "x5", 6 "x6", 1 "x2", 2 "x3", "x4" 2 iwm)
width iyo dhererka la qaban karo, sida codsigaaga!
Xirxirida: qaawan ama sariirtaada
3. welded mesh nooca wax Panel xayndaabka iyo soo saarida habka
Waxyaabaha: Korontada galvanized welded guddi mesh
maquufin kulul galvanized welded guddi mesh
Black carbon hooseeyo welded guddi mesh
PVC dahaarka guddi mesh welded
ahama birta welded guddi mesh
Ballaca Wire (mm)
dhererka ma xaddido
Previous: Xoojinta mesh Panel
Next: Staninless Steel welded Wire mesh
50mm 50mmx welded Panel
Guddiyada mesh hoy
Panel dogob Wire mesh
Panel Black welded mesh
Dahaarka leh Panel Wire mesh
La taaban karo Guddiyada Wire mesh
Double Wire welded Panel
Iron welded Panel
Birta mesh Panel
Caaga dahaarka Panel Wire mesh
Powder dahaarka Guddiyada Wire mesh
PCV dahaarka Panel welded Wire mesh
PCV dahaarka Guddiyada welded Wire mesh
Panel PCV welded Wire mesh
Guddiyada PCV welded Wire mesh
Guddiyada Super Tayada Wire mesh
Panel Qaxwo welded mesh
Guddiyada mesh welded
Guddiyada welded welded mesh
Welded Guddiyada Wire Garden
Wire welded 4x4 Panel
Guddiyada Wire mesh
Cattle Wire welded Guddiyada